Tsahivina fa tovolahy iray tafaporitsaka tamin’ny nitrangan’ny loza no ahiahiana. Tamin’ny 6 ora hariva latsaka, taorian’ny fiafaran’ny fandatsaham-bato ka niditra tamin’ny fanisana ny voka-pifidianana, teo amin’ny sekoly fanabeazana fototra iray eny Itaosy izay nahitana birao fandatsaham-bato dimy, tavoahangy plastika iray no nirefotra. Araka ny vaovao nampitain’ny zandarimariam-pirenena eo Ankadilalana, asidra sy taratasy aliminiôma na “papier alu” no tao anatin’ilay varingarina 33 santilitatra (33 cl). Nipoaka faran’izay mafy teo an-tokotanin’ilay efitrano fianarana ny tavoahangy. Zandary 4 avy hatrany no nandray an-tanana ny filaminana. Tovolahy iray noheverina ho natahotra ny fipoahana no vaky nandositra ary taty aoriana vao novinavinaina fa izy no tompon’ny ketrika sy fanatanterahana ny fanipazana ity tavoahangy miaty tsiranoka mampidi-doza ity. Tsy nisy ny naratra na maty. Ny zandarin’ny borigadin’Itaosy sy ny polisin’ny kaomisaria no mifanome tanana amin’ny fanadihadiana.